Mpampiasa marobe no milaza ny hadisoan'ny firmware rehefa mametraka macOS High Sierra | Avy amin'ny mac aho
Mpampiasa marobe no mitatitra ny hadisoan'ny firmware rehefa mametraka macOS High Sierra
Toa mpampiasa maro no hitatitra olana amin'ny fametrahana ny macOS High Sierra vaovao ary misy ny lesoka rehefa manavao ny firmware. Tsy azonay tsara ny anton'ity lesoka ity satria tsy zavatra mitranga amin'ny mpampiasa rehetra izany fa ny teboka voalohany tsy mifanaraka amin'ny endrika APFS vaovao sy ireo SSD ireo.
Ny fanavaozana dia manomboka ara-dalàna ao amin'ireo solosaina ireo ary avy eo dia mampiseho hadisoana iray aseho amin'ny sary izay hitantsika ao amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity -n'ny mpampiasa Osiris- sy mijanona ny fizotrany manontolo. Mazava ny lesoka: tsy mahomby raha "mizaha firmware".
Toa misy Mac maromaro izay manana kapila misy olana tsy mifanaraka ary ampidirina lisitra ireo ny mpanamboatra OWC dia nitatitra olana mitovy amin'izany, ireo dia:
Mac Pro (faran'ny 2013)
Mpampiasa marobe no milaza fa tsy manana ireo kapila ireo napetraka ao amin'ny Mac ary manana an'ity lesoka ity ihany tamin'ny fotoana fanavaozana. Na ahoana na ahoana, ny zavatra tokana azontsika atao dia ny ampiasao ny fizarazarana fanarenana, backup na ampidino macOS amin'ny alàlan'ny WiFi, fa kely ihany. Ny tena miharihary dia hoe raha tsy mahomby amin'ny fanavaozana ny firmware izy dia tsy afaka manavao ilay kinova isika ary ny hany vahaolana amin'izao dia ny miandry patch na vaovao farany avy amin'i Apple. Tsy ho lany ny Mac amin'ny alàlan'ny macOS teo aloha, amin'ity tranga ity dia macOS Sierra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Mpampiasa marobe no mitatitra ny hadisoan'ny firmware rehefa mametraka macOS High Sierra
Hok dia hoy izy:
Manana 27 ″ i7 faramparan'ny taona 2009 iMac miaraka amina 500Gb WD Blue SSD aho ary manome ahy izany lesoka izany rehefa manavao ny any High Sierra aho, efa nanandrana imbetsaka aho fa tsy nisy.
Mamaly an'i Hok
Edilberto dia hoy izy:
Salama, mpampiasa MacBook Pro aho, nametraka ny macOS High Sierra sy ny mahazatra rehetra aho, navelako hanao ny zava-drehetra, natory fotsiny aho ary rehefa nifoha aho dia nahazo hafatra diso ary milaza hoe avereno, ataoko izao , ny Mac-ko tsy mandalo ny fiandohan'ny fizarana, mamoaka litera mainty kely miseho ary miverina irery izy avy eo ary misy hafatra miseho fa nisy lesoka teo am-panombohana, miandry segondra vitsy dia miverina, ataoko daholo mitohy ny dingana ary ilay zavatra tsy maintsy ataoko na izay azoko atao
Valiny tamin'i Edilberto
Álvaro Augusto Casas Vallés dia hoy izy:
TANDREMO fa tsy ireo izay manana kisendrasendra misy takelaka sary wacom, tsy haiko raha notanisako teto izy ity fa raha manavao ny havoana avo dia manana ny mpamily ny wacom nefa tsy manavao ary hatramin'ny faran'ny oktobra dia tsy misy .
Mamaly an'i Álvaro Augusto Casas Vallés
Luis Vazquez C. dia hoy izy:
Nanome ahy hadisoana hafa io ..
Nentiko tany amin'ny serivisy teknika io ary mitovy ihany ny zava-mitranga, hiezaka ny hametraka azy amin'ny 0.,
Valiny tamin'i Luis Vázquez C.
Soa ihany fa efa nandany ny ampy tamin'ny lohahevitra aho. Miandrasa tsara kokoa
Albert Malaga dia hoy izy:
Rehefa manavao azy io dia mijanona ho banga ny efijery ary tsy manomboka indray, heverina fa napetraka tsara izy io. Tsy maintsy tsindrio ny bokotra off ary averinao indray ...
Valiny tamin'i Albert Malaga
Isaac Fusté Sanz dia hoy izy:
Ity lesoka ity dia mitranga amiko ao amin'ny MBP ahy hatramin'ny tapaky ny taona 2010, miaraka amin'ny Samsung SSD.
Nametraka ny SSD aho fa tsy ny kapila CD.
Valiny tamin'i Isaac Fusté Sanz
Azo antoka fa hamaha izany i Apple, toy ny ...
Ny lesoka mitovy amin'ilay notaterin'i Osiris.
Manana 27 ″ iMac aho tamin'ny faran'ny taona 2009.
Izaho dia manana fitaovana mitovy amin'izany ary manana olana mitovy amin'ny ssd 240gb.
Toa hitako fa hiverina any Sierra aho ary avy any Sierra dia havaoziko fa io no drafitro tsara indrindra
Jose Hurtado dia hoy izy:
Manana iMac 27 i7 faran'ny taona 2009 aho izay nosoloiko ilay DVD tamin'ny 240 gb lehibe. Ny fotoana voalohany nanandramako nanavao azy dia nanome ahy ny lesoka firmware. Fa nanandrana azy fanindroany aho ary niasa ho ahy ary izao dia miaraka amin'ny apfs. Teo anelanelan'ny andrana roa dia tsy nanao na inona na inona aho.
Valiny tamin'i José Hurtado
Nisy nahita ny vahaolana tamiko mitovy amin'ilay nitranga tamiko, tsy te ho very ny rakitrao
Ny Macbook Pro Mid 2010 miaraka amin'ny Sandisk Plus SSD dia manome ahy lesoka ary tsy manavao izany, mandefa ahy hiverina indray izy.
Macbook Pro toshiba kapila mafy, mahazo rafitra diso pckages Os sns aho ... ahoana no hamahana azy? Sa rahoviana isika no hanana vahaolana?
MacGyver dia hoy izy:
Hadisoana mitovy amin'ny firmware:
iMac (27-inch, Faran'ny 2009)
Mamaly an'i MacGyver
Miaraka amin'ny iMac 27 »I3 2010 dia nanova ny DVD ho an'ny SAMSUNG 840 PRO SSD aho
ary nametraka tsy nisy olana.
Miaraka amin'ny Mac Pro (faran'ny 2013) ny singa ofisialy rehetra.
Tsy misy fomba, na avy amin'ny fivarotana paoma, na amin'ny USB bootable.
Tsy manomboka akory amin'ny OSX tany am-boalohany, raha ny amiko, Mavericks
Ny lesoka tsy fahombiazan'ny fanamafisana ny firmware hatrany.
Niresaka tamin'ny fanohanana ara-teknika an'ny Apple aho, ary nilaza izy ireo fa tsy manana firaketana an-tsoratra
amin'ity lesoka ity, ary mety olana olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana io.
Miaraka amin'i Sierrra sy ireo teo alohan'izay dia tonga lafatra foana izy io.
ary izao olan'ny hardware ??
Rehefa avy nanavao ny masOS High Sierra 10.13 aho dia tsy afaka mamindra rakitra mihoatra ny 2 GB intsony amin'ny endrika Hard Drive ivelany amin'ny endrika MS-DOS (FAT32), rehefa manandrana manao izany aho dia mahazo fampitandremana milaza hoe: Ilay singa "xxx" tsy azo adika satria lehibe loatra amin'ny volavolany (2,67GB io)
Tsy nanana an'io olana io aho raha nampiasa kinova taloha momba ny rafitra fiasa.
Ankoatr'izay dia mbola mampiasa kapila mafy ivelany toy ny mahazatra ihany aho.
Inona no azoko atao mba hiasa mafy indray ny kapila ataoko ivelany, nefa tsy mila mamolavola azy?
Mamaly an'i carmelo
Marrcus dia hoy izy:
Carmelo, ny azonao atao dia ny manipy ny Mac ao anaty fako ary mividy zavatra manao izany.
Mamaly an'i Marrcus
nemois dia hoy izy:
Fat32 dia tsy manohana fisie lehibe kokoa noho ny 2gb, apetraho amin'ny exFat izany mba hahafahana mampiasa amin'ny rafitra samihafa
Mamaly an'i nemois
Tsy marina izany, 4GB izy ireo, raha ny tena izy manana rakitra lehibe kokoa noho ny 2GB amin'ny kapila iray ihany aho.
Misy ve ny vahaolana momba izany?
valiha dia hoy izy:
Tena manelingelina ny zavatra nataon'ny paoma taorian'ny nialàn'i Jobs, tsy mampino fa lasa ratsy hatrany izy ireo, nanavao ny havoana ambony aho ary nampijaly izany, satria mihamangatsiaka ny rafitra iray manontolo, tsy mamela ahy hanokatra folder izy, ireo programa tsy mamaly izy ireo, eny ... zava-poana .... Ary tsy afaka aho izao raha te-hamerina ny rakitrao aho ... ry zanak'olona bitika
Mamaly ny tongotr'osy
Miala tsiny amin'ny tongotr'osy, novaliako tamin'i Ferransky fa tsy ianao, fa he, izany no mitranga amintsika mividy banga amin'ny marika Mac, ny ekipako manaraka dia tsy hanana paoma lo ho toy ny sary famantarana. Veloma Mac.
ferransky dia hoy izy:
Mamaly an'i ferransky
Ferransky Inona no resahinao? Raha ny filazan'ireo rajako Mac, dia iray amin'ireo vitsy tsy fahita firy izahay izay manana olana amin'ny fandaharan-dratsiny, ho azy ireo dia mandeha toy ny manintona ny zava-drehetra, amidiny aminao ny fako amin'ny vidiny miakatra, mividy azy ianao, mahazo vola be izy ireo, raha ianao manana olana Amin'ilay banga amidiny anao, olanao ireo, tsy miraharaha na tsy miraharaha an'izany izy ireo.
alfpalac dia hoy izy:
manaiky tanteraka. Nahazo ny zava-drehetra avy amin'ny mac: iphone, ipad, imac aho ... Nanova ny zava-drehetra nandritra ny taona vitsivitsy aho satria diso fanantenana be ary sosotra. Aorian'ny fanavaozana ny rindranasa voalohany na faharoa dia tsy maintsy ario ilay fitaovana satria mazava ho azy fa tsy manao tsara ny asany ny mpamorona andrana mba hiantohana ny fifanarahana. Mihevitra ianao fa ny orinasa manan-danja sy mihidy toy izany dia tsy tokony hanana ireo olana ireo, fa ianao no gaga. Ny iMac ihany aho izao no mitazona ny tapaky ny taona 2011, izay taorinan'ny fanavaozana an'i Sierra dia somary miadana ary tsy ho ela dia hosoloiko amin'ny windows windows.
Mamaly an'i alfpalac
Carlos Arias placeholder sary dia hoy izy:
Hatramin'ny nametrahako ny Mac OS Hight Sierra, ny fampiharana "Mail" aloha dia tsy namela ahy hamafa rakitra ary avy eo amin'ny fametrahana faharoa, rehefa nosokafako izy io, dia nangataka ahy hisintona ny hafatro avy any Yahoo! ary rehefa nanao aho dia nahazo hafatra "nisy lesoka nitranga", izay tsy afaka nampiasa mailaka mihitsy aho. Niatrika ireo tsy fahombiazana ireo sy ny hafa izay nipoitra, ohatra ao amin'ny Bitdefender, izay tsy nahomby ahy nandritra ny taona maro. noterena hiverina tany amin'ny Mac OS Sierra ary eto dia mandeha tsara daholo ny zava-drehetra. Heveriko fa zavatra maro no mila ahitsy ao amin'ny Mac OS Hight Sierra ary tsy manoro hevitra aho ny hametraka azy io dieny izao, mandra-pamahan'i Apple ireo olana ireo, ankoatry ny lesoka ara-piarovana izay notaterin'ny mpampiasa hafa sy ny paralisasy fametrahana noho ny olana Firmware.
Valiny tamin'i Carlos Arias
Carlos, ny rafitra vaovao dia banga, ahoana no niverenanao tamin'ny kinova taloha? Araky ny gidro Mac izay tsy azo atao.
Fco dia hoy izy:
Miezaha hamerina ary tsindrio ny Command + R. Fafao ilay anananao ary avereno avy eo: raha tsy diso aho dia hametraka ny Sierra normal ... lazainao amiko raha mety aminao izany.
Valiny amin'ny Fco
Misaotra Fco. Efa nanao an'io aho, fa amin'ny fotoana rehetra dia manery ny tenako hametraka ny macOS vaovao Sierra 10.13 aho ary tsy namela ahy hiverina amin'ny kinova taloha, ankehitriny dia mijaly be aho satria ity rafitra fiasa vaovao ity dia tena ratsy, heveriko fa Apple Efa mikapoka any ambany io, saingy afaka gaga izy ireo noho ny hadalana ratsy kokoa, ka aleoko mieritreritra ny hiverina any Windows, farafaharatsiny any avelany hametraka solosaina matanjaka araka izay tiako aho ary tsy manery ahy hampiasa karatra sary AMD.
Ka tsy haiko ny manampy anao ...
Araka ny lazain'i Apple, raha tsindrio ny Option, cmd + R; Izy io dia manavao anao ny kinova farany (High Sierra), fa raha tsindrio ny bokotra cmd + R fotsiny; Tokony hanavao ny kinova macOS nialan'ny Mac ny orinasa ianao (normal Sierra).
Raha mamaky an'ity ianao dia aza manavao amin'ny macOs High Sierra, averiko indray: AZA ATAORA, ny olana tsy afaka apetraka dia olana madinidinika raha oharina amin'ny tsy fahombiazan'izy ireo, andro iray tsara dia tsotra fotsiny izy ireo tsy afaka miditra ao amin'ny kapila ataonao toy ny mahazatra ary tsy maintsy mamolavola sy mametaka amin'ny volo izy ireo, andro hafa na ny teny miafina na ny mpitantana dia hahafantatra azy ireo ary tsy maintsy mamolavola sy mametaka avy hatrany hatrany izy ireo, ary tsy ho an'ny zavatra, raha ny Mac ihany no ampiasainy hanoratany zava-poana, heveriko fa ny tambajotra sosialy dia afaka mampiasa azy io tsy misy olana, fa raha manana rindranasa maro izy ireo izay ilaina amin'ny asany isan'andro, na manana lalao izy ireo, maro amin'ireo no hijanona miasa satria tsy mifanaraka amin'ity rafitra vaovao ity izy ireo, ny Lords of Mac dia miharatsy hatrany, hany ka efa hitako ho toy ny hatsaran-tarehy miasa ny Windows 10, eny, eny, fantatro, ireo andriana chafrosot dia manao fako, saingy ny tompon'ny Mac dia mihoatra azy ireo amin'ny fanaovana programa ratsy kokoa, io ihany izay tazomin'i Mac dia ny vidiny lafo, izay tsy mendrika aloa ankehitriny, raha tsy hoe manana karazana fihemoran-tsaina na zavatra hafa ianao; Tsy nijanona intsony i Mac, fa tsy maintsy ekenao izany.
Manana Imac vaovao aho, herinandro vitsivitsy lasa izay, ary nisy lesoka tamiko rehefa nanandrana nametraka macOS High Sierra aho ... Nahazo marika voarara miaraka amina fotony mainty aho ary tsy hamela ahy handroso ...
Rehefa avy nifampidinika tamin'ny serivisy teknika Apple dia tsy afaka namaha ny olana izy ireo ary niandry azy ireo hiantso ahy amin'ny vahaolana ...
Rehefa avy namaky be dia be tao amin'ny Internet aho dia nanandrana izao: https://support.apple.com/es-es/HT204063 ary efa namaha ny olana tamiko!
Efa afaka nametraka azy tsy nisy olana aho ary milamina ny zava-drehetra amin'izao fotoana izao!
Manantena aho fa afaka manampy anao io!
fitiavana dia hoy izy:
Izaho koa dia afaka nanangana ny MAc tamin'ny url fanampiana izay ananan'i Fco.
Farafaharatsiny mba nahafahako nametraka indray ny MAC SIERRA.
Ary ampiasao Time Machine
Mamaly an'i amora
Io olana nanjo anao io, olana madinidinika io, tsy fantatrao izay miandry anao, efa ho hitanao, nahita bibikely be tao amin'ny macOs Sierra 10.13 izy ireo izay mampidi-doza ny tenimiafinao voatahiry rehetra, fa ny marina dia lalaon'ny ankizy io. raha ampitahaina amin'ny volabe rehetra izay nataon'ny tompokolahy an'i Apple tamin'ity rafitra fiasa vaovao ity.
Raha misy mamaky an'io ara-potoana: Aza manavao.
Azonao atao ny milaza fa ny mac-nao fotsiny no ampiasanao hanoratanao resaka tsy misy dikany amin'ny tambajotra sosialy, azoko lazaina amin'ny fanehoan-kevitrao, noho izany, tena hendry. Nampiasa ny neurons rehetra ve ianao mba hanomezana hevitra avo lenta toy izany? Misaotra an'ireo olona toa anao, Apple dia mahazo vola be amin'ny fivarotana vokatra ambany kalitao. Mihazakazaha, mandehana milahatra ao amin'ny magazay Apple ho voalohany mividy iPhones diso azy ireo.
Salama arahaba ary ny fanajana ny zavatra lazaiko aminao fa vao avy nanavao ny macbook fotsy 2010 ho osx high sierra tsy misy olana lehibe aho, somary niadana kely fotsiny nefa efa normal, olana kely fotsiny d sary an-tsaina izay noho ny fahatsiarovana d 2 gb qn dia ampy angamba amin'ny gb maro d voavaha ny fahatsiarovana, CHAO¡¡¡¡¡¡. ary mirary soa ireo ls izay tsy napetrak'izy ireo ary tratrany izany GREETINGS DSD VENEZUELA ¡¡¡¡¡¡¡¡
Efa nametraka macOS High sierra ianao ary avereno. Ny fampiasana ireo fitambarana lehibe rehetra omen'ny Apple dia tsy afaka nametraka azy noho io lesoka io. Avelao fotsiny aho hamerina hametraka avo sierra.
Azafady, raha misy manana vahaolana dia lazao aho. Raha tsy izany dia mitazona lanjan'ny taratasy $ 1000 tsara tarehy aho (MacBook Air amin'ny faran'ny 2014)
Ernest dia hoy izy:
Ry rahalahiko, nanavao ity kinova vaovao ity aho ary tsy nanome antsipiriany kely indrindra eo amin'ny biraon'ny parallels.Hitako fa rehefa miova amin'ny écran feno dia misy tsipika mitsangana hita fa toa tsy nohavaozina tsara ireo sary.
olona efa niseho toy izany koa?
Valiny tamin'i Ernest
Vakio dia hoy izy:
Nitranga tamiko izany ... Nahazo ilay fampitandremana hafatra voalaza etsy ambony momba ny olana aho ary rehefa nanandrana indray aho tamin'ny safidy restart dia nametraka azy tsy nisy olana Raha izany dia ... naharitra adiny iray sy sasany mahery, zara raha nihetsika ny hafatra tavela, reboots mandeha ho azy roa sy zavatra hafahafa hafa nandritra ny fametrahana azy, saingy nametraka sy nanavao tanteraka.
Izany rehetra izany dia nitranga tamin'ny Mini Mac roa taona.
Mamaly an'i Leio
Miatrika olana mitovy amin'izany aho.
Fanandramana fanaterana hamonjy rakitra sy sary.
Jose tovar dia hoy izy:
Mitovy amin'ny pro macbok miaraka amin'ny ssd tena ilaina. Manomboka amin'ny baiko + R dia mamela ahy hametraka OS sierra na dika mitovy amin'ny milina fanaovana fotoana, izay tsy nohavaoziko nandritra ny herintaona mahery, noho izany dia mila mamoy fisie maro be aho .. ..
Valiny tamin'i Jose Tovar
Sebastian Riquelme dia hoy izy:
Tsy mahatsikaritra ahy ny kapila mafy Thunderbolt.
Valiny tamin'i Sebastian Riquelme
Azoko fotsiny ilay hafatra hoe tsy afaka napetraka tao amin'ny solosainao ny mac OS, averiko indray izy io ary mitovy, inona no hataoko ???
Androany taorian'ny herinandro naharay fampandrenesana fanavaozana «Nanokana fotoana aho» hanavaozana MacBook Pro… .Niverina indray ary minitra vitsy taty aoriana dia nisy efijery fotsy nisy marika «voarara» …… Novonoiko ilay izy ary natrehiko dia nanindry aho cmd + R… .. ho sitrana…. amin'izao fotoana izao dia manomboka amin'ny macOS High Sierra…. Tsy fantatro raha ho tsara tarehy izany satria adiny iray sy sasany eo ho eo no hatao.
Oay! Inona no fahoriana…. Tsy niraharaha an'ity olana ity aho ary nitady vahaolana dia hitako ny bilaoginao… ..ary tara loatra ny fampitandremana TSY hanavao… ..
MISAOTRA anao amin'ny fampahalalana sarobidy.
Roa andro lasa izay dia nametraka ilay patch patch aho tamin'ny Mini, faran'ny taona 2012, niaraka tamin'i High Sierra. Tsy nandeha intsony io. Mijanona eo am-piandohan'ny sakana izy, miaraka amin'ny bara feno.
Nanandrana fomba fanarenana isan-karazany aho (mpampiasa tokana, alt + cmd + R + P, apetraho amin'ny fitaovana disk, fa tsy misy). Miandry torohevitra aho, manantena ny hisoroka ny famolavolana sy ny fahaverezan'ny angon-drakitra vokatr'izany.)
Salama, manana macbook pro 2013 izahay miaraka amin'i macosx sierra mandritra ny 1 volana ary omaly alina noho ny antony iray dia nisy fanavaozana mandeha ho azy natao izay nahatonga azy io rehefa namerina ny rafitra dia mihantona tanteraka amin'ny faran'ny fametrahana miaraka amina kisary voarara eo amin'ny efijery miaraka amin'ny White background.
Rehefa avy nanandrana zavatra isan-karazany aho ary tsy te-hanary ny backup timemachine notontosaina tamin'ny volana oktobra satria ny zavatra tiako dia ny famerenana ireo rakitra namboarina hatramin'ny volana desambra, dia nanandrana safari tamin'ny alàlan'ny menio fanarenana aho na dia tsy azo antoka aza ny hifandraisanao amin'ny fanohanana ara-teknika. . ilay varavarankely fifampiresahana izay tsy navalin'izy ireo mihitsy, rehefa tonga tao an-tsaiko ny fidirako ilay inisialin'ny kapila ary rehefa namerina ilay rafitra aho dia namerina sy namerina ny ara-dalàna rehetra.
Hiverina aho ary hanao fametrahana aotra miaraka amin'ireo angona ao anaty rahona satria tsy natoky volo aho ... Maneho hevitra momba izany rehetra izany aho, mba hahitana raha toa ka manatanteraka baiko sasantsasany any aoriana ny fanatanterahana ny fanampiana izay mamela hanomboka hisoroka ny lesoka ary mamita ny fametrahana an'ity fomba ity .. vintana ary manantena ny hamerenanao ireo rakitrao.
Tsy maintsy nifandray tamin'ny angona findaiko aho ary nisintona ny OS X El Capitan Ny rindrambaiko teo aloha satria ny fanavaozana dia mamoaka lesoka amin'ny firmware ka navelako tsy nisy fitaovana. Eo am-panaovana ny fiverenana aho. Fa inona kay!
Thailand dia niomana ny hanokatra ny Apple Store voalohany
Mamorona karatra fandraharahana tany am-boalohany mora foana amin'ny GN Business Cards